Esi wụnye adblock na Chrome maka gam akporo | Gam akporosis
Esi wụnye adblock na Chrome maka gam akporo
Ignacio Lopez | 04/04/2021 22:00 | Emelitere ka 05/04/2021 00:35 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ Google bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi kasịnụ n'ụwa, ọ gụnyere a Ad blocker maka Chrome na gam akporo. N'ezie, ọ naghị egbochi ụdị mgbasa ozi ọ bụla, ebe ọ ga-atụ nkume na elu ụlọ ya. Ihe ọ na-eme bụ igbochi mgbasa ozi kachasị iwe, ndị na-amanye anyị ịmekọrịta ha iji nweta ibe weebụ.
Dị ka ngwa igbochi mgbasa ozi Ha aghọwo ndị a ma ama, ụzọ nke igosipụta mgbasa ozi emewokwa ya. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ Adwords bụ usoro mgbasa ozi a na-ejikarị eme ihe n'ụwa iji kpọsaa, a na-eji ya iji bipụta mgbasa ozi, ọ bụghị ka ha gosipụta n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ihe mgbochi ma ọ bụ obere.
1 Kedu ihe mgbochi Google ad
2 Kedụ ụdị mgbasa ozi mgbasa ozi Google na-egbochi?
3 Esi rụọ ọrụ adblock na Chrome maka gam akporo
4 Ndị ọzọ na adblock nke Chrome
4.1 Nchọgharị Obi Ike
4.2 Samsung Nchọgharị Ntanetị Samsung
5 Gbochie mgbasa ozi niile na gam akporo
Kedu ihe mgbochi Google ad
Google kwuputara na mbido 2018 na o tinyere ihe mgbochi na Chrome (maka nyiwe niile dị na ya, ọ bụghị naanị maka ngwaọrụ mkpanaka), onye na - egbochi mgbasa ozi nke na - ewepụghị mgbasa ozi kpamkpam (ọ ga - emerụ isi azụmahịa gị) ma ọ bụrụ na ọ na - egbochi ụdị mgbasa ozi kachasị iwe anyị nwere ike ịchọta n'oge anyị ịntanetị nchọgharị.
Ebumnuche Google bụ akụkụ nke Njikọ maka Mma Mgbasa ozi, otu nzukọ ebe enwekwara Facebook (ọzọ n'ime nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ụwa) na Microsoft (dịka ndị ama ama ama ama) yana World Federation of Advertirses, Taboola, News Corp, European Interactive Digital Advertising Alliance, GroupM, NAVER Group ...
Ozi nke nzukọ a, dịka m kwuru n'elu, ga-akwụsị, ozugbo na ihe niile, na mgbasa ozi intrusive nke na-emetụta n'ụzọ na-adịghị mma ka igodo nke ọrụ. Ejiri ụdị mgbasa ozi ndị a n'ime:
Mgbapụta Mgbasa ozi. Mgbasa ozi iwe na-egosipụta ma na-amanye anyị imechi ha iji nweta weebụsaịtị, nke a makwaara dị ka windo mmapụta.
Anuncios Mbido. Mgbasa ozi ndị egosiri tupu ha etinye ọdịnaya nke ibe na nke ahụ na-amanye anyị ka anyị pịa ya iji nweta ọdịnaya ahụ.
Anuncios bi karịa 30% nke ihuenyo. A ga-egbochi mgbasa ozi niile nwere ihe karịrị 30% nke ihuenyo nke ama ama anyị.
Mgbasa ozi na-agbanwe agba ngwa ngwa iji jide uche onye na-agụ ya.
Mgbasa ozi na-egwu vidiyo na ụda na-akpaghị aka. Otu n'ime ụdị ihe arụ jọgburu onwe ya anyị nwere ike ịchọta.
Mgbasa ozi na ngụda. Anyị ga-echere nkwụsịtụ wee pịa bọtịnụ iji nweta ibe weebụ.
Mgbasa ozi egosiri ka anyị na-agagharị na weebụ.
Mgbasa ozi ezitere. Mgbasa ozi esitere na oge niile ma anyị enweghị ike tufuo ha n'oge ọ bụla.
Kedụ ụdị mgbasa ozi mgbasa ozi Google na-egbochi?
Mgbe ị na-eme nchọgharị na ibe weebụ, dị ka Androidsis, ị ga-ahụ na ma n'akụkụ ma n'etiti ederede, mgbasa ozi. Typesdị mgbasa ozi ndị a bụ ntọala nke mgbasa ozi Google na nke na-enye blọọgụ dị ka nke a aka ịkwagide onwe ha n'ụzọ akụ na ụba, ebe ọ bụ na naanị ego ha na-enweta sitere na mgbasa ozi.
Typedị mgbasa ozi a nwere ike ịbụ ederede ma ọ bụ ederede nwere ihe oyiyi, dabere na ụdị mgbasa ozi ụlọ ọrụ goro. Ndị a ha anaghị emetụta arụmọrụ nke weebụsaịtị, ma ọ bụ ohere nke ịnweta ọdịnaya, ya mere ha anaghị ewetara onye ọrụ nsogbu ọ bụla karịa ihe na-eme ka ọ dị mma ma ọ bụ na-ezighi ezi nke nwere ike iyi otu ihe ahụ.
Enweghi ntọala mgbasa ozi a, 99% nke blọọgụ ị nwere ike ịga leta mgbe niile agaghị adị, yabụ na aka gị, enwere ike na ha ga-adị adị site na ịkwụsị iji adblock ụdị mgbasa ozi na-egbochi gị igbochi ụdị ọdịnaya mgbasa ozi dị iche iche na ibe weebụ, ọbụghị naanị ihe ahụ intrusional Coalition for Better Ads na-ezubere iche.
Esi rụọ ọrụ adblock na Chrome maka gam akporo
Ihe mbụ anyị ga - eme iji bido igbochi mgbasa ozi na - egbochi ịbanye Ihe ngbanye mmapụta Chrome maka gam akporo, ihe ngbachi nke n’enweghi nkwusi bu nke ndi n’alughi olu.
Mgbe etinyere ya n'ọrụ, ibe weebụ ndị anyị gara agaghị enwe ike redirect na-enweghị ikike anyị gaa na ibe weebụ ndị ọzọ Ọzọkwa, ọ gaghị emeghe windo mmapụta. Iji rụọ ọrụ ya, anyị ga-emerịrị usoro anyị gosipụtara gị n'okpuru:
Anyị nweta ntọala nke Mbido nke Chrome.
Na-esote, pịa na Ntọala saịtị > Pop-acha ọkụ na redirects.
N'ikpeazụ, anyị ga- gbanyụọ mgba ọkụ nke mere na ha na-egosi na agba ntụ (ọ bụrụ na ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ na ọ na-adịghị arụ ọrụ).
Ozugbo anyi mechara ihe mgbochi nke mmapụta na redirects, anyị ga-akọwa otu esi eme ka onye na-eme ihe mgbasa ozi Chrome, onye na-egbochi ya nke mekwara (ma ọ bụrụ na ebumnobi nke nzukọ a bụ iji melite ahụmịhe ntanetị Internetntanetị, a ga-arụ ọrụ a na ndabara).
Na-esote, pịa na Ntọala saịtị > Anuncios.
Ọzọ, anyị ga- gbanyụọ mgba ọkụ nke mere na ha na-egosi na agba ntụ (ọ bụrụ na ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ na ọ na-adịghị arụ ọrụ).
Ndị ọzọ na adblock nke Chrome
Ọ bụrụ n’ịchọghị etu adblock chrome si arụ ọrụ, anyị nwere ike iji ihe nchọgharị ndị ọzọ kwe ka ojiji nke ndọtị ndị ọzọ igbochi ụdị mgbasa ozi niile ma ọ bụ ndị tinyegoro mgbasa ozi nke na-asụkarị.
Nchọgharị Obi Ike
Site na akara ngosi nke 4,7 n'ime 5 ga - ekwe omume na ihe karịrị 400.000 ratings, Brave bụ otu n'ime ihe nchọgharị kachasị mma dị na gam akporo. Obi ike, ọ bụghị naanị na-ekwe ka anyị bigbochi ụdị mgbasa ozi ọ bụla (gụnyere windo mmapụta), mana gụnyekwara sistemụ mgbochi na-emechi emechi ga-enyere anyị aka igbochi ibe weebụ ịmara na anyị na-eleta ma si otú a mara ihe ndị na-amasị anyị, mmasị anyị, ihe ndị ka mkpa ...
Site na ijikọta onye ngọngọ nke mgbasa ozi, ọsọ ị na-ebu nke ibe weebụ anyị na-eleta ji okpukpu abụọ ọsọ. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere gbatịa ruo awa 2,5 ọzọ oge nchọgharị na ngwaọrụ anyị.
Anyị nwekwara ụdị desktọọpụ na mkpofu anyị, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmalite ichefu banyere Chrome ruo mgbe ebighi ebi, ya na Brave anyị nwere ike ime ya n'enweghị nsogbu ọ bụla. Nwere Obi Ike Nchọgharị maka gị budata n'efu site na njikọ ndị a.
Samsung Nchọgharị Ntanetị Samsung
Ma, ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ihe nchọgharị kachasị mma dị ugbu a na gam akporo, anyị nwere ikwu banyere Samsung Internet Browser. Ihe nchọgharị a, nke ị nwere ike wepu n'okpuru nche anwụ nke ụlọ ọrụ Korea nke Samsung, nwere akara akara nke 4,4 kpakpando na ihe karịrị nde 3.500.000.
Gịnị na-eme Samsung Internet Browser kacha mma nchọgharị? Ihe nchọgharị Samsung na-enye anyị ohere ịwụnye ndọtị, otu n'ime ole na ole (ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị) nke na-enye anyị ohere ịme ya. N'ihi ọrụ a, anyị nwere ike wụnye Adblock a maara nke ọma (gbakwunye ndị ọzọ) dị na nyiwe desktọọpụ niile na otu n'ime ndị na-eme mgbasa mgbasa ozi kachasị n'ụwa.
Samsung Internet Browser dị maka nbudata kpam kpam n'efu ma dakọtara na ekwentị gam akporo ọ bụla. Na Storelọ Ahịa Ngwa, kwa beta ụdị nke ihe nchọgharị a dị, mbipute nke na-enye anyị ohere ịnwale iji aka mbụ akụkọ ahụ na-abịarute na njedebe ikpeazụ.
Tanto Nwere Obi Ike dị ka Samsung Nchọgharị Ntanetị Samsung Ha bụ ihe nchọgharị abụọ kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play nke na-enye anyị ohere igbochi mgbasa ozi sitere na ibe weebụ anyị na-eleta mgbe niile. Ka o sina dị, ọ bụghị naanị ha.
Anyị nwekwara ike ịchọta ndị ọzọ na-atọ ụtọ ndị ọzọ amachaghị àmụmà, ihe nchọgharị mepere emepe nke na-enye anyị ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ ọnụọgụ, gụnyere ohere nke kee whitelists nke weebụsaịtị ebe anyị achọghị ka egbochi ọdịnaya mgbasa ozi.
Nchọgharị Lightning - Nchọgharị weebụ
Developer: Anthony እንደገና
Nhọrọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị, dị na mpụga Storelọ Ahịa Play, dị na Nnukwu, ihe nchọgharị mepere emepe ọzọ, ihe nchọgharị na-enye anyị ozi zuru ezu banyere ọkwa niile na o gbochiri ka anyị na-eji ya.
Gbochie mgbasa ozi niile na gam akporo
Chekwaa bụ ihe ọzọ na-akpali nhọrọ anyị nwere na anyị nwere na gam akporo igbochi mgbasa ozi na gam akporo. N'adịghị ka ihe nchọgharị, Adguard bụ ngwa nke, na mgbakwunye na igbochi mgbasa ozi ihe nchọgharị, ọ na-egbochikwa ọtụtụ mgbasa ozi anyị nwere ike ịchọta na ngwa na egwuregwu.
Ọ dịghị mgbọrọgwụ ikikere dị mkpa inwe ike iji ngwa ahụ. Ngwa a dị maka nbudata n'efu iji nwalee arụmọrụ nke ngwa ahụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya na-enweghị ụdị oke ọ bụla, anyị ga-agafe igbe ahụ.
Mgbe m nwesịrị Adguard ma na igodo na na ngwa dị iche iche gụnyere mgbasa ozi, ekwesịrị m ikweta nke ahụ arụ ọrụ nke ọmaAgbanyeghị, enwere ụfọdụ ngwa ebe ọ naghị egbochi mgbasa ozi ịpụta, yabụ oge ikpe a dị mma iji hụ ma ọ dabara maka mkpa ojiji gị.
Ọnụ ego nke ngwa maka ngwaọrụ 3 bụ euro 1,25 kwa ọnwa, nke pụtara 15 euro kwa afọ, nke kewara n'etiti ndị enyi 3 bụ euro 5 kwa afọ, ọnụahịa karịrị ọnụ maka ihe ọ na-enye anyị. Nhọrọ ọzọ bụ ịmekọrịta atụmatụ ndụ, onye ọnụahịa ya maka ngwaọrụ 3 bụ euro 38 wee si otú a chefuo ịkwụ ụgwọ kwa afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Esi wụnye adblock na Chrome maka gam akporo
Etu esi ewepụ ngwa ndị arụnyere na gam akporo